धान किसानको, भाउ साहुको - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : आइतबार, मङि्सर ०७, २०७७०७:३८ पब्लिक आवाज /संवाददाता
काठमाडौं, ७ मंसिर । सिँचाइको दुःख छँदै छ, बेलामा मल पाइँदैन। अनेक कष्ट सहेर किसानले उब्जाउने धानमा पनि अन्ततः व्यापारीको हैकम चल्छ। किसानले फलाउँछन्, साहुले मूल्य राख्छन्। पैसाले फिटफिटी परेका किसान जति भन्यो त्यतिमा बेच्न बाध्य हुन्छन्। सरकारले यसपालि नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको मागअनुसार धान किन्न अख्तियारी त दियो, तर धेरै ढिला। कात्तिक पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीमार्फत धान खरिद कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्दा अधिकांश किसानले व्यापारीलाई निकै सस्तोमा बेचिसकेका थिए।
सरकारले असार ३ गते धानको समर्थन मूल्य कायम गरेको थियो। मोटा प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ र मध्यम २८ सय ८५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको थियो। मसिनो जातको समर्थन मूल्य भने निर्धारण गरिएको छैन। व्यापारीले मोटा धान प्रतिक्विन्टल १ हजार ८ सयदेखि १ हजार ९ सय रुपैयाँमा किसानबाट खरिद गरेका छन्। यस्तै मध्यम जातको प्रतिक्विन्टल २ हजारदेखि २ हजार १ सय रुपैयाँमा उठाएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
एक पैसा पनि कर नछोडनु ,अर्थमन्त्री !
प्रशासनका स्थगित सेवा सुचारु, कुन बार के सेवा ? (सूचनासहित)
कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिनू : सर्वोच्च (आदेशको पूर्णपाठ)
बेलायतमा कोभिड–१९ को नियम तोड्नेलाई १० हजार पाउण्ड जरिवाना